दीपक मनाङे भ्र’ष्टाचार देखेर ल’ज्जित हुदै विकास समितिबाट राजीनामा दिने, प्रधानमन्त्री ओली भ्र’ष्टाचार नै नदेख्ने ! कस्तो अचम्म ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/दीपक मनाङे भ्र’ष्टाचार देखेर ल’ज्जित हुदै विकास समितिबाट राजीनामा दिने, प्रधानमन्त्री ओली भ्र’ष्टाचार नै नदेख्ने ! कस्तो अचम्म !
दीपक मनाङे भ्र’ष्टाचार देखेर ल’ज्जित हुदै विकास समितिबाट राजीनामा दिने, प्रधानमन्त्री ओली भ्र’ष्टाचार नै नदेख्ने ! कस्तो अचम्म !
काठमाडौं । वर्तमान सरकारको पालामा कतिसम्म भ्र’ष्टा’चार भएको रहेछ भन्ने कुरा सत्तारुढ नेकपाकै एक प्रदेश सांसदको भनाइले पुष्टि गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सांसद राजीव गुरुङ अर्थात् दीपक मनाङे जो आफैं वि’वादित पृष्ठभूमिका व्यक्ति हुन् । विगतमा गुण्डागर्दीमा संलग्न मनाङले देशमा भइरहेको भ्र’ष्टाचार देखेर आफू ल’ज्जित भएको प्रतिक्रिया दिँदै गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिबाट राजीनामा दिएका छन्।
मनाङेले जतासुकै भ्र’ष्टा’चार नै भ्र’ष्टा’चार भएको, पटक पटक रोक्न आग्रह गर्दा पनि कतै सुनुवाइ नभएको, सरकारमा जिम्मेवार नेताहरू नै भ्र’ष्टाचारमा लागेको प्रतिक्रिया दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली सं’कटमा परेका छन् । मनाङेले गण्डकी प्रदेशको वि’कृति र वे’थितिबारे भने पनि समग्रमा देश यसरी नै चलिरहेको छ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्र’ष्टाचार भएको भन्दै संसद्को र्सावजनकि लेखा समितिले छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ । अ’ख्तियार दु’रुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि खरिदसम्बन्धी कागजात मगाइसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने अहिलेसम्म भ्र’ष्टातार भएको देखेका छैनन्।
उनले आफ्नो सरकारको पालामा भ्र’ष्टाचार हुनै नसक्ने भन्दै दा’बी गर्दै आएका छन् । नेकपाकै सांसद मनाङेले देशमा जताततै भ्रष्टा’चार नै भ्र’ष्टाचार भएको देख्ने, तर प्रधानमन्त्री ओलीले कतै पनि भ्र’ष्टाचार भएको किन देख्न सकेनन् ? भन्ने प्रश्न आमसर्वसाधारणले उठाउन थालेका छन्।
एक हप्ता बजार बन्द गर्ने निर्णय, तिहारको लागि किनमेल ठप्प